Alahady 27 Septambra 2020. – FJKM
Izay andrasan’ny Tompo amintsika
1-Ny fanajana ny fanekena
Nanaiky hanofa tanimboaloboka ny mpiasa tany voalaza eto. Misy ny fotoana nifanarahana tamin’ny tompontany mba hanefana ny hofany . Indrisy anefa fa fisamborana ny iraka no nafitsok’ireto mpanofa . Mpivadika , tsy azo itokisana . Izany no ilazana ireto mpanofa ireto . Fihetsika mandiso fanantenana ny Tompo tsotra izao izany . Nanafatra antsika izy mba hiasa sy hitandrina ny saha (Gen 2.15), saingy tsy araka izany no ataontsika.
2-Ny fialana amin’ny herisetra
Fahatsorana , fahaizana mandray olona, fihanoana, fanatanterahana ny hafatra nampitain’ny iraka no nantenaina . Indrisy anefa fa herisetra no valinkafatra hita teto : fisamborana , kapoka , ratra , fanalambaraka. Izany dia maneho miharihary ny habibiana nataon-dRaolombelona . Aoka hialana ny herisetra.
3-Mihaino sy manaraka ny fananarana
Mba takatr’ireo mpihaino ihany ary nazava tamin’izy ireo tsara ilay hafatra teto, saingy ny fisamborana ihany no nasetrin’izy ireo . Ny vahoaka izay olombelona tahaka azy ireo indray no natahorany fa tsy ny Tompo . Raha ny tokony ho izy dia fanetrentena , fandinihantena , fibebahana , fialana amin’ny toetra ratsy no hita . Mahaiza mihaino .
Nahoana ny olona sasany no mafy hatoka sarotra anarina ?
Sabotsy 31 Oktobra 2020.
Zoma 30 Oktobra 2020.
Alakamisy 28 Oktobra 2020.
Alarobia 28 Oktobra 2020.
Talata 27 Oktobra 2020.
Alatsinainy 26 Oktobra 2020.
Sabotsy 24 Oktobra 2020.
Zoma 23 Oktobra 2020
Alakamisy 22 Oktobra 2020.